ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမြင်ဝေဖန်လာသူတွေကို ဒီနည်းလေးတွေနဲ့အပြုံးမပျက်တုံ့ပြန်မယ် 😎 – Trend.com.mm
ကိုယ်အောင်မြင်လာလေလေ ကိုယ်ဘာလုပ်နေလဲ လူတွေက ပိုပြီးစောင့်ကြည့်လာလေပါပဲ။အလုပ်ခွင်မှာဖြစ်စေ၊ပညာရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်စေ ကိုယ့်ကိုတစ်ယောက်ယောက်က ဝေဖန်မယ်။အပြစ်တင်မယ်။ကိုယ်တစ်ခုခုမှားလုပ်မိလို့၊ကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့မတူညီလို့ တိုက်ခိုက်လာကြတာတွေရှိမယ်။ယုတ်စွအဆုံး ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်အကြောင်းပိုသိပြီး အစအဆုံးသူတို့စိတ်ကြိုက်ဝေဖန်နေတာမျိုး 🙄
ဒါတွေအားလုံးကိုခေါင်းထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပဲစိတ်ပင်ပန်းရတာပါ။လူဆိုတာကလည်းခက်သား။ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတာပြောရင်ခဏလေးနဲ့မေ့လွယ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတာတစ်ခုခုဝေဖန်ပြီဆို စိတ်ထဲတနုံ့နုံ့နဲ့နေရထိုင်ရခက်တယ်လေ။ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ ကောင်းစေချင်လို့ပြောတာရှိသလို ကိုယ့်အပေါ်တမင်တကာကြီးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီတော့ ကိုယ်က ဒီဝေဖန်မှုတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတုံ့ပြန်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ?
ဝေဖန်လာသမျှအားလုံးကို လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်ဖို့မလိုသေးပါဘူး။ပထမဆုံး ဝေဖန်လာသမျှကိုနားထောင်ပါ။ပြီးရင် ဘယ်အရာက ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာ၊ဘယ်အရာကတော့ကိုယ့်ကို ဘလိုင်းကြီးဝေဖန်ရှုတ်ချတာခွဲခြားလိုက်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေ လူတွေက သူများတွေကိုဝေဖန်ချင်တာပဲရှိတာ။တကယ်တော့ သူများယောင်လို့လိုက်ယောင်တာမျိုး၊ဝေဖန်စကားပြောလိုက်ပေမဲ့ တကယ်ကျတော့ ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်း၊ဘာကိုဝေဖန်ချင်မှန်း သူတို့ဘာသာသူတို့တောင်နားမလည်ကြပါဘူး။ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်ရမှာကရှင်းရှင်းလေး။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာကိုဝေဖန်ချင်တာလဲ၊တိတိကျကျပြန်မေးလိုက်ပါ။
ကိုယ့်အပေါ်လာရိုင်းလား။သူရိုင်းရင်တောင်ကိုယ်ပြန်မရိုင်းပါနဲ့။လေးလေးစားစားနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ပါ။သူတို့ပြောတဲ့ဝေဖန်စကားက ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်နေလား။သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။စိတ်တိုဒေါသထွက်နေတာက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ ဝေဖန်စကားကိုကိုယ့်ဘက်က ချက်ကျလက်ကျနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ သည်းခံနိုင်စွမ်းအားတော့လိုပါတယ်။
ဝေဖန်စကားတွေထဲက ကိုယ့်အတွက် လုံးဝအကျိုးမရှိတဲ့ဝေဖန်စကားတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါတွေကိုမထုတ်ဘူးဆိုရင် စိတ်ပင်ပန်းမှုကပြီးဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဝေဖန်စကားတွေပဲ ခေါင်းထဲထည့်ပါ။
ဝေဖန်စကားတွေနားထောင်ပြီးရင်လက်ခံတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဘယ်လိုလက်ခံမလဲအပေါ်မှာမူတည်ပါသေးတယ်။ဝေဖန်စကားတွေကို ကိုယ့်ရဲ့လှေကားထစ်အဖြစ် ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက်သုံးသွားမလား၊ဒီဝေဖန်စကားတွေကြောင့် ယုံကြည်ချက်တွေအောက်ဆုံးရောက်၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်၊ဒေါသတွေထွက်နေမလား? ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ် 😉
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်အတိုင်းမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။သူများတွေကမှန်တာဝေဖန်နေတာဖြစ်နိုင်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့မှားနေမှန်းမသိ ပြန်ပြီးရန်တွေ့တုံ့ပြန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ သူတို့ဝေဖန်သလိုကိုယ်က တကယ်ပဲဟုတ်နေလား၊မဟုတ်ဘူးလားဆန်းစစ်ပါ။လူဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်တော့ ညှာညှာတာတာလေးတွေးတတ်ကြပါတယ်။မညှာတာပါနဲ့။တကယ်တမ်း သူများအဝေဖန်မခံနိုင်ဘူး၊အဝေဖန်မခံချင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်က ဝေဖန်စရာမလိုလောက်အောင်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် ဝေဖန်လာသမျှကို သေချာခွဲခြားပြီး ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်တတ်ပါစေ။
ဝေဖန်မှုတွေမရှိရင်လည်းကိုယ်ဘယ်နေရာတွေမှာ မှားနေလဲ၊လိုနေလဲဆိုတာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ဝေဖန်လာသမျှကို I Don’t Care ဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်နေကျအတိုင်းရှေ့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဒီဝေဖန်မှုတွေထဲက ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်အရာကို ဆွဲထုတ်ယူသင့်ပါတယ် 😉
ကိုယျအောငျမွငျလာလလေေ ကိုယျဘာလုပျနလေဲ လူတှကေ ပိုပွီးစောငျ့ကွညျ့လာလပေါပဲ။အလုပျခှငျမှာဖွဈစေ၊ပညာရေးနယျပယျမှာဖွဈစေ ကိုယျ့ကိုတဈယောကျယောကျက ဝဖေနျမယျ။အပွဈတငျမယျ။ကိုယျတဈခုခုမှားလုပျမိလို့၊ကိုယျ့ရဲ့ရပျတညျခကျြနဲ့မတူညီလို့ တိုကျခိုကျလာကွတာတှရှေိမယျ။ယုတျစှအဆုံး ကိုယျနထေိုငျတဲ့ပတျဝနျးကငျြက ကိုယျ့အကွောငျးပိုသိပွီး အစအဆုံးသူတို့စိတျကွိုကျဝဖေနျနတောမြိုး 🙄
ဒါတှအေားလုံးကိုခေါငျးထဲထညျ့ထားမယျဆိုရငျ ကိုယျပဲစိတျပငျပနျးရတာပါ။လူဆိုတာကလညျးခကျသား။ကိုယျ့အပျေါကောငျးတာပွောရငျခဏလေးနဲ့မလှေ့ယျပမေဲ့ ကိုယျ့အပျေါမကောငျးတာတဈခုခုဝဖေနျပွီဆို စိတျထဲတနုံ့နုံ့နဲ့နရေထိုငျရခကျတယျလေ။ဒီနရောမှာ တဈခုပွောခငျြတာကတော့ ဝဖေနျတယျဆိုတာ ကောငျးစခေငျြလို့ပွောတာရှိသလို ကိုယျ့အပျေါတမငျတကာကွီးတိုကျခိုကျပွောဆိုတာလညျးရှိပါတယျ။ဒီတော့ ကိုယျက ဒီဝဖေနျမှုတှကေို အကြိုးရှိရှိအသုံးခတြုံ့ပွနျတတျဖို့လိုပါတယျ။ဘယျလိုတုံ့ပွနျရမလဲ?
ဝဖေနျလာသမြှအားလုံးကို လဈြလြူရှုပဈလိုကျဖို့မလိုသေးပါဘူး။ပထမဆုံး ဝဖေနျလာသမြှကိုနားထောငျပါ။ပွီးရငျ ဘယျအရာက ကိုယျ့ကိုကောငျးစခေငျြလို့ပွောတာ၊ဘယျအရာကတော့ကိုယျ့ကို ဘလိုငျးကွီးဝဖေနျရှုတျခတြာခှဲခွားလိုကျပါ။
တဈခါတဈလေ လူတှကေ သူမြားတှကေိုဝဖေနျခငျြတာပဲရှိတာ။တကယျတော့ သူမြားယောငျလို့လိုကျယောငျတာမြိုး၊ဝဖေနျစကားပွောလိုကျပမေဲ့ တကယျကတြော့ ဘာကိုဆိုလိုခငျြမှနျး၊ဘာကိုဝဖေနျခငျြမှနျး သူတို့ဘာသာသူတို့တောငျနားမလညျကွပါဘူး။ဒီတော့ ကိုယျလုပျရမှာကရှငျးရှငျးလေး။ကိုယျနဲ့ပတျသကျလို့ ဘာကိုဝဖေနျခငျြတာလဲ၊တိတိကကြပြွနျမေးလိုကျပါ။
ကိုယျ့အပျေါလာရိုငျးလား။သူရိုငျးရငျတောငျကိုယျပွနျမရိုငျးပါနဲ့။လေးလေးစားစားနဲ့ပွနျပွီးတုံ့ပွနျလိုကျပါ။သူတို့ပွောတဲ့ဝဖေနျစကားက ကိုယျ့အတှကျအသုံးဝငျနလေား။သူတို့ကို ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။စိတျတိုဒေါသထှကျနတောက အလုပျမဖွဈပါဘူး။သူတို့ရဲ့ ဝဖေနျစကားကိုကိုယျ့ဘကျက ခကျြကလြကျကနြဲ့ပွနျပွီးတုံ့ပွနျနိုငျဖို့ သညျးခံနိုငျစှမျးအားတော့လိုပါတယျ။
ဝဖေနျစကားတှထေဲက ကိုယျ့အတှကျ လုံးဝအကြိုးမရှိတဲ့ဝဖေနျစကားတှကေို ခေါငျးထဲကထုတျလိုကျပါ။အဲ့ဒါတှကေိုမထုတျဘူးဆိုရငျ စိတျပငျပနျးမှုကပွီးဆုံးမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အတှကျအသုံးဝငျတဲ့ဝဖေနျစကားတှပေဲ ခေါငျးထဲထညျ့ပါ။
ဝဖေနျစကားတှနေားထောငျပွီးရငျလကျခံတတျဖို့လညျးလိုပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကိုယျဘယျလိုလကျခံမလဲအပျေါမှာမူတညျပါသေးတယျ။ဝဖေနျစကားတှကေို ကိုယျ့ရဲ့လှကေားထဈအဖွဈ ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျရေးအတှကျသုံးသှားမလား၊ဒီဝဖေနျစကားတှကွေောငျ့ ယုံကွညျခကျြတှအေောကျဆုံးရောကျ၊စိတျဖိစီးမှုတှဖွေဈ၊ဒေါသတှထှေကျနမေလား? ရှေးခယျြမှုမှနျကနျဖို့လိုပါတယျ 😉
ဒီနရောမှာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျအမှနျအတိုငျးမွငျတတျဖို့လိုပါတယျ။သူမြားတှကေမှနျတာဝဖေနျနတောဖွဈနိုငျပွီး ကိုယျကိုယျတိုငျကတော့မှားနမှေနျးမသိ ပွနျပွီးရနျတှတေုံ့ပွနျတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ဒီတော့ သူတို့ဝဖေနျသလိုကိုယျက တကယျပဲဟုတျနလေား၊မဟုတျဘူးလားဆနျးစဈပါ။လူဆိုတာက ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျတော့ ညှာညှာတာတာလေးတှေးတတျကွပါတယျ။မညှာတာပါနဲ့။တကယျတမျး သူမြားအဝဖေနျမခံနိုငျဘူး၊အဝဖေနျမခံခငျြဘူးဆိုရငျ ကိုယျက ဝဖေနျစရာမလိုလောကျအောငျနဖေို့လိုပါတယျ။အဲ့ဒီအတှကျ ဝဖေနျလာသမြှကို သခြောခှဲခွားပွီး ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပွုပွငျတတျ
ဝဖေနျမှုတှမေရှိရငျလညျးကိုယျဘယျနရောတှမှော မှားနလေဲ၊လိုနလေဲဆိုတာ မတှနေို့ငျပါဘူး။ဝဖေနျလာသမြှကို I Don’t Care ဆိုပွီး ကိုယျလုပျနကေအြတိုငျးရှဆေ့ကျလုပျမယျဆိုရငျတောငျ ဒီဝဖေနျမှုတှထေဲက ကိုယျ့အတှကျအကြိုးရှိမယျ့အရာကို ဆှဲထုတျယူသငျ့ပါတယျ 😉